antiX 15, yakajeka kwazvo distro neLinux kernel 4.0 uye SysVinit | Linux Vakapindwa muropa
antiX ndeye Kugoverwa kweGNU / Linux Chiedza uye cheka-kumucheto, zvichibva paDebian Kuedza uye ine dhizaini iyo yagara ichiedza kupa akawanda mikana kunyangwe uchishandisa hwindo maneja senge Fluxbox. Muenzaniso weizvi zvakasiyana-siyana maererano nesarudzo dzekugadzirisa inyaya yekugona kushandisa theme yerima kana kusarudza mwenje kana simbi, iyo yatinogona kudzvanya F6 panguva yekutanga uye kusarudza.
Iyi ingori imwe yezvinhu zvitsva zveiyo antiX beta 15, inowanikwa kwemaawa mashoma uye izvo zvakare inosanganisira iyo Linux kernel 4.0. Izvi zvinopa kwete chete kugadzikana uye chengetedzo yeiyo nyowani vhezheni uye rutsigiro rwehuwandu hwakawanda hweanenge achangosvika hardware, asiwo bhenefiti yakakura yekurarama chigamba, icho chisiri chimwe chinhu kunze kwekukwanisa kuisa zvigamba pasina kukosha kwekutanga zvekare. timu.
Iyi beta yakagadzirwa uchishandisa Devuan's debootstrap, the Debian forogo izvo zvakamuka pakati peavo vashandisi vasina kugutsikana nazvo Systemd saka mune ino distro yatinoenda iva neSysVinit. Uye kana iri dhizaini, inounza sechinhu chitsva, pamusoro pechinhu chataurwa pamusoro apa chesimbi, menyu nyowani uye mupepeti wemenu, asi zvakare bhagi rine chinja Wallpaper rakagadziriswa.
antiX inowanikwa ye32-bit uye 64-bit mapuratifomu, uye inogona kuva yakaiswa pamakomputa ine 64 MB chete ye RAM (kunyangwe muzviitiko izvi zvichave zvakakodzera kukwikwidza kuchinjanisa faira). Tinogona kuitora kubva muchikamu chekurodha pasi, papeji yepamutemo.
Mamwe Mashoko: antiX
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » antiX 15, yakajeka kwazvo distro neLinux kernel 4.0 uye SysVinit
Mune ino link pane Sourceforge-yemahara kurodha pasi antix:
Pindura kuna Neon_Knight